Nzọụkwụ 7 maka Atụmatụ Marketingzụ Ahịa Kachasị Mma | Martech Zone
Nke a bu ezigbo ihe omuma sitere na nnyefe tupu afọ a, Nzọụkwụ 7 maka Atụmatụ Ọdịnaya Kachasị Mma. Nke a bụ usoro dị otu a maka etu Onye isi nchịkwa anyị na-ahụ maka ọdịnaya, Jenn Lisak, si wepụta usoro maka ndị ahịa anyị.
Di na nwunye ndụmọdụ ndị ọzọ: Nke mbụ, gbaa mbọ hụ na sistemụ njikwa ọdịnaya gị kachasị nke ọma ka igwe nchọ iji chọpụta ihe nchọta nsonaazụ ọdịnaya gị kwesịrị igosipụta. Nke abụọ, aga m agbanweta Digg na usoro nkwalite maka StumbleUpon!
Tags: content Marketingnjikarịcha ọdịnayanjikarịcha ọdịnaya
Nkọwapụta vidiyo na vidiyo nke na-akọwapụta: Ngwá Ọrụ Na-ahụkarị Maka Ndị Ahịa